Dhibaato ka jirta adeega boostada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhibaato ka jirta adeega boostada
La daabacay fredag 10 augusti 2012 kl 10.13
Boosto lagu ridayo irid. Arkivfoto: Erik G Svensson/Scanpix.
Dad badan ayaa ka cabanaya in waraaqado loo soo diray ay ku lumaan hanaanka qeybinta waraaqaha boostada iyada oo ashtakooyinka soo gaara hay’ada boostada ay aad u korortay sanadkan marka loo eego sanadkii hore.
Ilaa iyo bishii luulyo ee sanadkan aan ku dhex jirno dad gaaraya 6800 ayaa ayaa la soo xiriiray hay’ada mas’uulka ka ah boostada iyo tilifoonada ee magaceeda la yiraahdo Post- och telestyrelsen, iyada oo dadka intaa la eg ay sheegeen in waraaq ku socotay ay waayeen oo aan la soo gaarsiin. Sanadkii hore tirada dadka soo ashtakooday ayaa ahaa 5400, taasi oo micnaheedu yahay in afar dalool hal dalool ay soo korortay cabashada.
Hay’ada qeybisa waraaqaha boostada ee Posten ayaa sidoo kale waxaa soo gaara cabashooyin fara badan oo kaga imaanaya dadweynaha.
Dadka cabanaya waxaa ka mid ah haweeney ku nool magaaladda Stockholm oo la yiraahdo Yvonne Holmén oo sheegeysa in qalaldaadka boostada ay aad u kordheen.
– Waraaqo soo qaldamay ayaa ii yimaada. Marka ay ku soo dhacaan iridkeyga waraaqo la igu soo qalday waxaan kor iyo hoos u aadaa jaran jarada guriga aan deganahay si aan u helo qofka iska leh, laakiin qofka iska leh ayay dhacdaa in uu ku nool yahay wado iga fog marka dib baan ugu celiyaa sanduuqa boostada, ayay tiri Yvonne Holmén.
Haweeneydan ayaa degan guriga ay ku nooshahay 20 sano waxayna sheegeysaa in ay dareensantahay in habka boostada uu sii xumaaday waqtiyadan dambe, oo waxaa dhacda in ay soo daahdo boostada ama mid qalad ah kugu soo dhacdo.
Rayi’ uruurin macaamiisha ah oo ay sammeeysay hay’ada boostada iyo isgaarsiinta bishii janaayo ayaa waxaa lagu ogaaday dad badan ay ku soo dhacaan waraaqado aysan laheyn.
Waxaa kala caddeyn waxa sababaya qaladaadka xagga boostada hase yeeshee Jens-Hugo Nyberg oo boostaale ka shaqeeya hay’ada Posten ayaa sheegaya in shirkada boostada ay sammeysay shaqaalo dhimis aad u badan sanadahan dambe.
– Shirkada Posten waxay mar walba sheegtaa in cadadka waraaqaha la isku diro ay yaraadeen waana sax laakiin waxaa sidoo kale jirta in shaqaale dhimiste ay xowli ku socoto mar walba marka waan dareemeynaa in culeyska shaqada uu soo kordhay , ayuu yiri boostaale Jens-Hugo Nyberg.
Shirkada posten oo iyadu qeybisa ku dhowaad 90 boqolkiiba waraqooyinka dalka ayaa waxaa soo gaaray sanadkan aragtiyo kaga yimid macaamiisha oo ka badan kuwii soo gaaray sanadkii hore. Cabashooyin ku dhow 35 000 ayaa soo gaaray posten tani oo ah in cabashooyinka ay soo kordheen 45 boqolkiiba
Per Ljungberg, afhayeenka hay’ada Posten, ayaa qiray in ay jiraan qalaadaad, qaarkoodna la saxay balse waxuu xusay in shirkada posten ay maalin walba gaarsiiso fariimo boosto guryo gaaraya 4,5 milyan iyo shirkado gaaraya 900 000 sidaasi daraadeed aysan suuragal aheyn in la arko macaamiisha oo qanacsan 100% xitaa haddii la isku dayo in la qanciyo.